Google na -enyocha nnweta ozugbo na kọntaktị site na ọchụchọ Google | Androidsis
Ngwa Google na -aghọ otu n'ime ụlọ ike maka gam akporo na site na ya ị nwere ike ịme ụdị omume niile na nkasi obi nke iwu olu. Ọ nwere ike bụrụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na anyị eleba anya na njirimara niile anyị hụrụ na -abata na ngwa a ebe ebidokwara ya dịka ngwa nwere onwe ya kpamkpam.
Ugbu a bụ mgbe ọ na -agbakwụnye atụmatụ ọzọ na -atọ ụtọ nke ga -ewere ọkwa ọzọ nwere ikike anyị nwere ugbu a mgbe anyị na -achọ otu kọntaktị anyị site na Google. Nsonaazụ ọchụchọ ahụ ga -enwe nkwalite doro anya mgbe anyị nwere ike ịkpọ ha na zipu ozi ederede ma ọ bụ email site n'otu oghere dị ka amaara ya ụbọchị ndị gara aga.
Ugbu a, mgbe a na -achọ otu n'ime kọntaktị Google gị site na ngwa ọchụchọ, ngwa ahụ na -egosi kaadị kọntaktị nke ahụ na -eduga anyị ozugbo na oghere ahụ na -enweghị nnukwu omume ga -ekwe omume. Nnukwu ihe ọhụrụ bụ na ị nwere ike ịkpọ onye ọrụ ozugbo wee ziga ozi ederede ma ọ bụ email site na otu nsonaazụ, nke ga -azọpụta sekọnd ole na ole na ịmalite ngwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na -eji ọrụ "OK Google" ma ọ bụrụ na anyị nwere ya n'ọrụ. desktọọpụ.
Kedu Anyị enweghị ike ịnye gị APK, ebe ọ bụ na ọrụ ọhụrụ a emetụtaghị ụdị ọchụchọ Google ọ bụla ma ọ bụ Ọrụ Google Play, ọ bịakwala ọtụtụ ihe site n'akụkụ sava. Nnwale njirimara nke ejedebere na usoro ndị ọrụ nwere ihu ọma iji nwee ike nwalee ya na nke ahụ ga -erute ndị ọrụ ndị ọzọ na ụdị ikpeazụ mgbe ụmụ okorobịa nọ na Google kpebiri na ọ bụ oge onye ọrụ ọ bụla. nwee ike iji nkọwa a mana ọ ga -emecha bụrụ ihe bara uru nye ọtụtụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha Google na ụzọ mkpirisi iji kọntaktị site na nyocha ọchụchọ